शुद्ध मह खानुका फाइदै-फाइदा भनिन्छ यस्ता रोग`हरु च्वाट्टै पार्छ महले हेर्नुहोस् – Ap Nepal
April 8, 2021 1030
औष`धीय गुण भएको म`हको कुरा गर्दा धेरै`को मुख रसाउँछ । खाए पनि ठीक लाए पनि ठीक बहु`उपयोगी वस्तु मह`लाई अमृत पनि भनिन्छ । मह जाडो मौस`ममा फुल्ने तोरी वा च्यूरीको फूल`बाट तयार हुन्छ । शक्ति`बर्धक रोग नि`रोधक सबैको लागि भनेको मह र अमला चूर्ण (धुलो एक चम्चाको दरले दैनिक से`वन गरेमा धेरै फाइदा हुन्छ ।
यसमा कार्बोहाइड्रेड, भिटामिन बी, सी, म्याग्ने`सियम, आइरन, सोडियम , क्याल्सियम लगा|यतका धेरै तत्व`हरु पाइन्छ । यसको नि`यमित सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । दमको रोग – दम रोग छ भने बे`लपत्रको धूलो एक चम्चा`मा एक चम्चा मह मिसा`एर बिहान र बेलुका खा`एमा राम्रो हुन्छ ।
रुघा, खोकी – महले रुघा, खोकी`लाई पनि ठिक गर्छ । बेलपत्रको धूलो एक चम्चामा एक चम्चा मह मिसाएर खाएमा रुघा, खोकी र ज्वरो च्वाट्टै हुन्छ । टंसिल – टंसिल भएमा वा दुखे`कोमा बेसार र मह फिटेर रुद्रघण्टीमा बेलु`का सुत्ने बेलामा लगाउने गरेमा ठीक हुँदै जान्छ ।
धेरै दीसा लागेमा – यदि तपाइलाई धेरै दिसा ला`गिरहेको छ भने पनि यसले ठिक गर्छ । जीराको धूलो, ५० ग्राम, सिदेनूनको धूलो ५० ग्राम र घ्यूमा फुरा`एको हिङ १० ग्रामको धूलो सबै मिसा`एर मनतातो पानीसँग १/१ चम्चा मह मि`साएर दिनको ३/४ पटक खाएमा यो समस्या समाधान हुन्छ ।
घाँटी बसेमा – घाँटी बसेमा एक ग्लास पा`नीमा एक चम्चा मह हालेर गारगल गरेमा ठिक हुन्छ र बसेको स्वर पनि खुल्छ । भोक जगाउन – १ डाडु भाङको गेडाको धू`लोमा १ चम्चा मरिचको धूलो मि`साउने र बिहान खा`ली पेटमा १ चम्चा महसँग फि`टेर खाएमा भोक लाग्छ ।
यस्तै नियमित मह खानाले स्मरण शक्ति बढ्ने, छालामा चमक ल्याउने, पेट सफा हुने, शरीर ज्यादै फुर्तिलो हुने पनि हुन्छ ।
Prevमोटरसाइकल किन्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ वर्षमा छु; टसहितकाे आकर्षक अ फर, यी कम्पनीले दिँदै छन्
Nextगर्भनिरोधक साधन पिल्सको खाँदा के साच्चिकै महिलाको तौल बढ्छ ?
यस्तो रहिछ खुट्टामा पैसा राखेर ढोगेको तस्वीरको वास्तविकता-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)